दूधको दूध, पानीको पनि दूध- विचार - कान्तिपुर समाचार
सन् १९५०–५१ मा भारतमा मोठ दूध वितरणमा धनी राष्ट्रहरूले खाद्य अनुदानस्वरूप दिएको हिस्सा ६७ प्रतिशत थियो, जुन घटेर १९६०–६१ मा ३६ प्रतिशत, १९८९–९० मा १० प्रतिशत र २००० देखि शून्य भयो ।
असार १, २०७८ महेन्द्र पी‍. लामा
स्कुले विद्यार्थी छँदा हामी दसैं कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहन्थ्यौं । दसैंको छेकतिर उज्यालो–छ्यांग आकाश–वातावरण, बर्खाले ल्याएको भल–पहिरोबाट मुक्त हुने समय, नयाँ लुगाफाटा–जुत्ता अनि त फेरि देउसी–भैलेनीको मीठो आगमन । दसैंमा हामी पाँच भाइ–बहिनी, आमा–आपा मने ड्राइभरको अस्टिन गाडीमा चढी लगभग ४० किलोमिटर टाढा लङ भ्यु चिया कमानको चिलाउने धुरामा माम–म्हेम्हेबाट टीका लगाई आशीर्वाद लिन पुग्थ्यौं ।
गाडीको किराया २६ भारु थियो । अमला–सुन्तला–निम्बु–भोगटे लटरम्म फलेको त्यस ठाउँमा केवल आनन्द र मजाले एक सप्ताह बित्थ्यो । टीकाको बिहानै घरको कटेरोनजिक सुन्दर ढुंगामा म्हेम्हेले खेपासुङको पूजा गर्दै, दसैंका लागि नै राखेको रातो–कालो सेखिने भालेलाई शिरमा पानी छर्कंदै तीनपल्ट पर्सिएपछि धारिलो–चिटिक्क खुकुरीले च्वाट्टै पार्थे । अनि फेरि टीका, विशेष भोजन, दही–मोही–चिउरा–मिठाई–निगार । अद्भुत रमाइलो, यस अवधिको विशेष आकर्षण हुन्थ्यो— माम–म्हेम्हेले टीका लगाइदिँदै दिने, सुनौंसुनौं लाग्ने, मन नै छचल्किने आशीर्वाद । अनि त फेरि मामले बाघमुखे सानो थैलीबाट दिने दसैंको भेट ।
भाग्यमानी हुनू, डाँडाकाँडा काट्नू, ठूलो मान्छे हुनू, धेरै ज्ञान–बुद्धि हासिल गर्नू, सदैव स्वस्थ रहनू, बूढापाका–आमा–आपा र आफूभन्दा ठूलाको सदैव आदर गर्नू, चोरी–ढाँटीदेखि टाढा रहनू — आशीर्वादका यी शब्द–वचनहरू लगभग १२–१३ वर्ष नै अन्तरात्मा नै भिज्ने गरी माम–म्हेम्हेले हामीभित्र हालिदिए । यो ‘भाग्यमानी’ शब्दले मलाई सदैव छुन्थ्यो, सताउँथ्यो, कौतूहल जगाउँथ्यो र खोजमा हिँड्न मन पर्थ्यो । कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा अर्कोतिर ‘मान्छे आफ्नो भाग्यको आफैं निर्माता’ हो भन्ने भगवान् बुद्धको विचारले फेरि अर्कै ढंगमा विक्षिप्त भएँ ।
आज छ दशकको घुम्ती, गोरेटो, देवराली र भन्ज्याङ, डाँडाकाँडा टुकुलटुकुल हिँड्दै काटेपछि लामो सास लिँदै पछि फर्केर हेर्दा, फेरि याद आयो, ‘भाग्यमानी हुनू है’ को वचन–आशीर्वाद । अनि जीवनमा भाग्यसँग जुझेका, भाग्यले जुराएका र भाग्यले बगाएका क्षणहरू झलझल्ती याद आए । जीवनको भाग्यले जुराएका सुरम्य, सुगम र अविस्मरणीय क्षणहरूमध्ये सेन्ट मदर टेरेजाले मेरो शिरमा अलौकिक हात राखेर दिएको आशीर्वादसँगसँगै भारतको हरित क्रान्तिका पिता एमएस स्वामीनाथन र श्वेत क्रान्तिका पिता भर्गिज कुरियनको छत्रछायामा काम गर्ने मौका पनि हुन् । स्वामीनाथनसँग पाँच वर्ष अति नै घतलाग्दो ढंगमा मिलेर कार्य गरें । उनी सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयको प्रथम कुलाधिपति (चान्सलर) अनि म संस्थापक कुलपति । एउटा अद्वितीय अवधि थियो यो । ‘ठूलो मान्छे’ को गुण थियो उनमा, वसुधैव कुटुम्बकम्ले खर्लप्पै खाएका व्यक्ति । मैले के चाहिँ सिकिनँ उनीबाट ? सन् १९६० को दशकमा हामी सपरिवारले भुससरीको रातो आँटाको रोटी खानुपर्थ्यो, किनकि धान–चामलको हाहाकार थियो देशभरि नै । स्वामीनाथन र उनका वैज्ञानिक साथी नर्मन बोर्लोहरूले भारतलाई कसरी खाद्यान्नमा आज पौडी खेल्ने बनाए, यो अचम्मैको यात्रा छ । पछि लेखुँला ।
भर्खरै पीएचडीको डिग्री हासिल गरेको समयमा मैले गुजरातको विश्वप्रसिद्ध, खेडा जिल्लाको आनन्दमा रहेको नेसनल डेरी डेभलपमेन्ट बोर्ड (एनडीडीबी) बाट त्यहाँको योजना एवं विकास विभागमा युवा अधिकारीका रूपमा काम गर्ने नियुक्तिपत्र पाएँ । ठूलो अवसर थियो यो । मानिएको संस्था अनि भर्गिज कुरियनको नेतृत्व । भारतले सातौं गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन (सन् १९८३) को आह्वानमा स्थापित गरेको रिसर्च एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा सम्पूर्ण गुटनिरपेक्ष राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रहरूबारे भव्य कार्य गर्ने संस्थामा कार्यरत थिएँ म । सबै त्यागेर आनन्द पुगें ।
सन् १९५०–६० को दशकमा भारतमा दूधको हाहाकार थियो । अमेरिकाको पीएल–४८० र विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत आएको पाउडर दूध र मखन तेलले भारतका कुनाकुनामा दूधको अभावको पूर्ति गरिन्थ्यो । मसिना बालबालिका दूध नपाएर कुपोषणको सिकार हुनुपर्थ्यो । त्यही बखत भर्गिज कुरियन, एक तरुण अभियन्ता, आनन्द पुगे । त्यहाँ निजी डेयरीहरूले दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई गरेको शोषण आँखाले देखे । अर्कोतिर, यदि अमेरिका र युरोपले दिएको पाउडर दूध र मखन तेलमै निर्भर रहँदै गए, भारतका कृषकहरूले अलिअलि गर्ने दूध उत्पादन पनि बिस्तारै छोड्लान् र यसले भारतलाई विकसित राष्ट्रकै दूध आयातमा पूर्ण निर्भर बनाउला भन्ने भय भर्गिज कुरियन र उनका साथीहरूलाई भयो । र, दूध उत्पादनको अभियान चलाए; युद्ध नै छेडे ।
आज ६० वर्षपछि, सधैं दूधको अभावमा चुर्लुम्म डुब्ने भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने राष्ट्र भएको छ । बर्सेनि लगभग २७ करोड टन दूध उत्पादन गरेर, विश्वको मोठ ८५ करोड टनको, २० प्रतिशत हिस्सा नै भारतले ओगटेको छ । यति घना जनसंख्या भएको राष्ट्रमा प्रतिव्यक्ति दूधको प्राप्यता सन् १९५१ को १३२ ग्राम र सन् १९९७ को १८० ग्रामदेखि बढेर सन् २०१८ मा ३५१ ग्राम पुगेको छ ।
दूध उत्पादनमा भारत विश्वकै एक नम्बरमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छैन । कुरियनको सोच दूरगामी, कार्यगराइ वैज्ञानिक ढंगको र नेतृत्व अति नै गहकिलो । उनीसँग निकै नजिकमा मैले बसेर तीन वर्ष काम गरें । उनले पाँच वटा ठूला हतियार चलाए, दूध उत्पादनमा परिवर्तन होइन रूपान्तरण ल्याउनलाई । प्रथमतः, दूधको अभावलाई पूर्ति गर्न जति पनि दूध पाउडर र मखन तेलको अनुदान भारतले पाउँथ्यो, त्यसलाई अबउसो जनमानसमा सीधै वितरण गर्न बन्द गरिदिए ।
यी सामानहरूलाई अबउप्रान्त भारतमै उत्पादन गरिएको दूधमा मिलाएर (रिकम्बाइन) बजारमा बेच्न थालियो । दूध अस्तिसम्म निःशुल्क बाँडिन्थ्यो, अब सबैले किन्नुपर्‍यो । दूध बेचेर आएको पैसा गाउँबस्तीका दूध उत्पादकहरूलाई दूधको उचित मूल्यका रूपमा दिन थालियो । दूध उत्पादन गर्नेहरूको संख्या बढ्न थल्यो । र, बिस्तारै दूधको अनुदानको अंश घट्दै गयो । अर्थात्, सन् १९५०–५१ मा भारतमा मोठ दूध वितरणमा धनी राष्ट्रहरूले खाद्य अनुदानस्वरूप दिएको हिस्सा ६७ प्रतिशत थियो, जुन घटेर १९६०–६१ मा ३६ प्रतिशत, १९८९–९० मा १० प्रतिशत र २००० देखि शून्य भयो । भारत आज दूध र यसका अरू वस्तुहरू निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख राष्ट्र भएको छ ।
दोस्रो, कुरियनले दूध उत्पादनका लागि सन् १९६५ मा एनडीडीबीको स्थापना गरे । अनि यसैमार्फत अपरेसन फ्लड कार्यक्रम सुरु गरे । अर्थात्, दूधको भेल र भल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे । तेस्रो, दूध उत्पादन र वितरण गर्ने एउटा नयाँ मोडल अघि ल्याए । हरेक जिल्लामा तीनवटा स्तरीय कोअपरेटिभको ढाँचा । गाउँका उत्पादकहरूको सहकारी संस्था, त्यसपछि जिल्लास्तरको सहकारी संस्था र राज्यस्तरको संस्था । यस मोडललाई व्यापक रूप दिन नामकरण गरियो— आनन्द मिल्क युनियन लिमिटेड (अमुल) । सबै राज्यमा यो मोडल अघि बढाइयो । आज यसमा भारतका १२ लाख सहकारी संस्था र १.३ करोड दूध उत्पादक कृषकहरू सदस्य छन् । अमुल अन्तर्गत गुजरातको राज्यस्तरको फेडरेसनले दूधबाहेक बर्सेनि २५ हजार टन मखन, २० हजार टन दूध पाउडर, १६ हजार टन चियाको स्प्रे, ५६०० टन घिउ, १५ सय टन दही र ५० लाख लिटर सुगन्धित दूध उत्पादन गर्छ ।
चौथो, दूध उत्पादन गरेर बजारमा बेच्ने सिलसिलामा हरेक स्तरमा कुरियनले नयाँ प्रौद्योगिकी ल्याए । गाईभैंसीले दिने दूधको गुण र परिमाण बढाउनलाई यी पशुहरूको प्रजनन नै परिवर्तन गर्ने र उन्नत बनाउने क्रस ब्रेड, आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन, इम्ब्रायो ट्रान्सफर आदि गाउँगाउँ पुर्‍याइए । गाईभैंसीले खाएको घाँस र कुँडोलाई दूधमा बढी मात्रामा परिणत गर्नलाई विशेष खाद्य र युरिया मोलासेस ब्लक आदि वितरण गरिए । गाईवस्तुका मुख, खुट्टा आदिमा लाग्ने बिमारलाई रोक्न नयाँ खोपहरू ल्याइए । दूध बोकेर गाउँको सहकारी संस्थामा पुग्ने कृषकहरू दूधमा कति फ्याट रहेछ भन्ने परीक्षण, सानो मेसिनमा एक कप दूध हाली, आफैं गर्न जान्ने भए र एक लिटरमा कति कमाएँ भन्ने कुरो पनि तत्कालै थाहा पाए । हरेक दिन, सप्ताह, महिनामा कृषकको घरमा नगद पैसा पुग्ने भयो ।
पाँचौं, गाउँमा जम्मा गरिएको दूध जिल्लास्तरको फ्याक्ट्रीमा पुर्‍याएपछि दूधलाई कसरी अन्य वस्तुमा परिणत गर्ने भन्ने काम सुरु गरियो । घिउ, मक्खन, दही, चीज, पनीर आदि बनाइएपछि कसरी दिल्ली, बम्बई आदितिर पठाउने अनि तरल दूधलाई प्याकेट र बटनले थिचेर झार्ने बल्क भेन्डिङ मसिनमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने पद्धतिहरू व्यापक रूपमा बनाइए ।
दूध उत्पादनमा तीन ठूला चुनौती थिए । प्रथमतः, गाईभैंसीले दूध हिउँदमा धेरै बढ्ता र बर्खाझरीमा अति नै कम दिने गर्थे । र, राज्यराज्यमा दूधको कमी हुन्थ्यो । यतिसम्म कि, मिल्क ग्रीड नामक रेलगाडीको लहरमार्फत, कमी रहेका क्षेत्रहरूमा दूध पुर्‍याइन्थ्यो । हिउँदमा दूधको मूल्य खर्लप्पै घट्थ्यो । हामीलाई कुरियनले आउँदो हिउँदमा कुन जिल्ला र राज्यमा दूध यथेष्ट हुन्छ, यसलाई अध्ययन गरी अनुमान गर्ने पद्धति खोज भनेर काम दिएपछि म आफ्नै दल लिएर महाराष्ट्र–तमिलनाडु–उत्तर प्रदेश पुग्थें । हामीले दूध उत्पादनको अनुमान गर्ने कम्प्युटरजडित मोडल बनाएर गाउँगाउँमा बाँड्यौं । आज यो समस्या नै छैन । हिउँद र बर्खामा गाईभैंसीको दूध दिने क्षमताको क्षेत्रगत अनुपातलाई यति सन्तुलित ढंगमा मिलाइयो कि दूधको बहाव सदैव एउटै रहने भयो ।
अर्को चुनौती थियो— तरल दूधलाई पनि टेडा प्याकमा हाली साधारण पसलमा सर्फ र खानेतेल जस्तै कसरी बेच्ने ? कुरियनको ठूलो सपना थियो यो । हामीलाई बडोदास्थित हिन्दुस्तान प्याकेजिङ कम्पनीतिर अध्ययन गर्न पठाइन्थ्यो । अल्ट्रा हिटिङ तकनिक ल्याइयो । आज दूध नसड्ने वस्तु भई हरेक पसलमा पाइन्छ ।
अझै अर्को चुनौती थियो— साहीवाल, गीर, रेड सिन्धी, कांक्रेज आदि हाम्रा पारम्परिक नश्लका गाईभैंसीलाई जर्सी, होल्सटेन फ्रिजेन आदि जस्तै बढ्ता दूध दिने कसरी बनाउने ? सबै कुरा बिस्तारै समाधानको मार्गमा ल्याइए । अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि, दूध दिने हरेक गाईभैंसीको शरीरमा जडित सानो विद्युतीय यन्त्रले तिनमा भिटामिनको कमी, खाद्य पोषणको खाँचो मात्रै नबताएर बाछा–बाछी जन्माउने रहर गर्दा उष्णता आएको कुरा पनि सहजै थाहा पाइन्छ ।
कुरियन अति नै अनुशासित व्यवस्थापक अनि अध्यक्ष थिए । आनन्दमा उनकोमा नै पहिलो मारुती–१००० पुगेको थियो । एक दिन उनलाई कहीँ टाढा जानुपर्‍यो । ‘तिमी पनि आऊ’ भनेपछि म गाडीमा चढें । म उनलाई सधैं एउटै प्रश्न गर्थें, ‘तपाईंको सफलताको मूल मन्त्र चाहिँ के हो ?’ त्यस दिन खेडा जिल्लाबाट बडोदा जाने बाटामा बाढी आयो, अचानक । गाडीबाट उत्रेर पानीको भेल हेर्दै गर्दा उनले मलाई भने, ‘औ लामा ! आज तिम्रो प्रश्न सोधेनौ त ?’ मैले फेरि प्रश्न दोहोर्‍याएँ । उनको जवाफ तीन–चार शब्दको थियो, ‘किनकि हामी दिल्लीबाट टाढा छौं ।’ अर्थात्, सफलताको मूल मन्त्र नै दिल्लीको राजनीति र नोकरशाहीबाट टाढा रहनु हो ।
कुरियनले नै खानेतेल र सागसब्जीलाई आफ्नो ‘मदर डेयरी’ भन्ने अभियानमा सामेल गरे । आज सब्जीसमेत दूध केन्द्रसँगै जोडिएको पसलमा पाइने भयो । एनडीडीबी अचम्मैको संस्था थियो । भ्रष्टाचारको नामोनिसान थिएन, तर सुविधा मनग्गे थियो । हाम्रो क्याम्पस सुन्दर थियो । त्यहीँ भेट भयो विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका दिग्गज व्यक्तिहरूसँग ।
कुरियनका अभिन्न मित्रहरूमा रामकृष्ण हेगडे, टीएन शेषन, श्याम बेनेगल आदि थिए । बेनेगलले बनाएको ‘मन्थन’ फिल्म विश्वप्रसिद्ध भयो, जसमा कुरियनकै कथाव्यथा पोखिएको थियो, साधारण कृषकहरू रमाएका दृश्यहरू थिए । अमुल मोडल आज विश्वमै प्रचलित छ । र, कुरियनले निर्माण गरेको रुरल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट पनि ।
मैले गाउँगाउँमा घुमेर भारतलाई बुझें । तमिलनाडुको सलेम जिल्लाको आतुर भन्ने ठाउँको जिप्सी जस्तै जनजातिको नरीकुराबार भन्ने कोलोनीमा केही समय बिताएँ । यी जनजातिका अगुवाले एक दिन घरमा भोजकालागि बोलाएर गएको थिएँ । मलाई देखेर ससाना दुई छोरी–नानीहरू झ्यालबाट चियाउँदै हाँस्न लागे । कौतूहल भएर मैले ‘यी नानीहरू किनयसो गर्दै छन् ?’ भन्दा उनले जे भने त्यो अति नै मन छुने थियो । ‘हाम्रा छोरीहरूले तपाईंजस्तो अनुहार भएको व्यक्ति कहिल्यै देखेका थिएनन् । उनीहरू जन्मेपछि घर–गाउँ छोडेर कहीँ गएका छैनन् । हाम्रो कोलोनीमा कसैको घरमा पनि टेलिभिजन छैन र यी नानीहरू यस्तो अनुहार–रूप भएका मान्छे पनि हुँदा रहेछन् भन्दै कौतूहलले उफ्रेका हुन् ।’ तीस वर्षअघि पनि भारतको गाउँ यस्तो थियो ।
कुरियनलाई विश्वले पूजा गर्छ, कृषकहरूका निम्ति ईश्वरसरह व्यक्ति हुन् उनी । तर उनले ‘भारत रत्न’ जस्तो उपाधि र भारत सरकारको मान्यता कहिल्यै पाएनन् । उनीसँग जो पनि संलग्न भए, सबैलाई हौसला र प्रेरणाको भालाले छेडे; ज्ञान–बुद्धिको मुंग्रोले पिटे; गाउँ, गरिब र राष्ट्रप्रेमको ज्वालामुखीले पोले । यस्तो क्रान्ति ल्याए कि दूधको दूध त छँदै थियो, पानीको पनि दूध बनाइदिए, कृषकहरूलाई बजार व्यवस्थासँग स्वच्छ र प्रत्यक्ष रूफमा जोडेर ।
प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१६
अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन ।
असार १, २०७८ राजेन्द्र महर्जन
नेपाल देश हो कि राज्य हो, मुलुक हो कि राष्ट्र हो ? नेपाली राज्यको मूल चरित्र के हो ? राज्य मात्रै हो कि राष्ट्र–राज्य हो कि बहु राष्ट्र–राज्य हो कि ? कुनै देशको राज्यको चरित्र प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र–राज्य’, कुनै देशको राजनीतिक संरचनालाई बुझाउन ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ किन लेखिन्छ ? के कसैले बहुराष्ट्रिय–राज्यको गफ गर्नासाथ नेपालको भूगोल एकाएक टुक्रिन्छ ? राजेन्द्र महतोले अनियमित सत्तामा आरोहणसँगै दिएको वक्तव्यका कारण यस्ता प्रश्न र विवाद उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
महतोले ओली सरकारको कुर्सीमा चढ्नासाथ ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ उद्घोष मात्रै के गरे, सडकमा आगो बलिहाल्यो, राजनीतिक गर्मी बढिहाल्यो र मिडिया पनि तात्न थालिहाले । कसैले अवैध सरकारमा आसीन हुँदा बिटुलिएको मुहार सफा गर्न वा सडकको पुरानो नारालाई आगामी चुनावमा भजाउन ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नारा लगाउनासाथ चियाको कपमा राजनीतिक तुफान नै उठ्यो । त्यही तुफानमा निथ्रुक्क भिजेको नेपाली मानसको राष्ट्रबोध देशभरि नै पुतपुताएको देखेर अनौठो पनि लाग्दैन ।
शब्दमा राजनीतिक चर्तिकला
हामी नेपालीको मनमस्तिष्कलाई नेपाल भनेको एकसाथ देश–मुलुक–राज्य–राष्ट्रका रूपमा अर्थ्याएर दीक्षित गरिएको छ । हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पढाइएको छ— नेपाल भनेको त्यस्तो मुलुक हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहको ‘साना दुषले आर्ज्याको होइन’ । त्यसैकारण नेपाल भनेको कसैले कमाएको मुलुकजस्तै लाग्न सक्छ । मुलुक वा मुल्कको अर्थ देश वा वतन मात्रै होइन, कसैको जायदाद (पोसेसन) पनि हो । अतः ज–जसले देशलाई आर्ज्याको मुलुक ठान्छन्, उनीहरूले राज्यको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विखण्डनकारी देख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?
छेपारो वा मान्छेले मात्रै होइन, शब्दले पनि रङ फेर्दो रहेछ । हामी आजभोलि देशलाई एउटा शासनअन्तर्गत रहेको विशिष्ट भूभाग वा ‘वतन’, ‘कन्ट्री’ र ‘टेरिटोरी’ का रूपमा बुझ्छौं । जबकि मल्लकालसम्म पनि देश भनेको नेपालमण्डलका राज्यका तीन स्थानीय शासनका क्वाठ (कोट) क्षेत्र, देश क्षेत्र र ग्राम क्षेत्रमध्ये एक थियो । जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, देश क्षेत्र वा इलाका भनेको राजधानीभन्दा तल्लो किसिमको सहरिया बस्ती (पुर) थियो । त्यसैले अमृतानन्द शाक्यले करिब दुई सय वर्षअघि लेखेका थिए, ‘नेपालमण्डलअन्तर्गत काष्ठमण्डप, ललितपत्तन, भक्तपुर नाउँ गरेका महानगरहरू पचास देश, गाउँ, निगम र जनपद (ठूला बस्ती) ले घेरिएका छन् ।’ हाम्रो सूचना र ज्ञानको सीमाका कारण ‘कुनै जमानामा एउटा राज्यभित्र पचासौं देश हुँदा रहेछन् नि’ भन्दा कोही राँकियो भने छक्क पर्नुपर्दैन ।
आजभोलि देशभित्र अनेक राज्य र विभिन्न प्रदेश हुन्छन् भन्दा आश्चर्य मानिँदैन, भारतमा विभिन्न प्रान्त र प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) भन्ने चलनका कारण । खासमा राज्य भनेको देश होइन, बरु देशभित्रको त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले निश्चित भूभागभित्र बस्ने मानव समुदायबीच न्याय र दण्डको व्यवस्थापन गर्छ । यसरी राज्य बन्न निश्चित सिमाना भएको भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता, शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकार र शासकीय सम्प्रभुता आवश्यक हुन्छन् ।
‘राष्ट्र–राज्य’ को अर्थ र रूप
राजनीतिशास्त्रमा राज्यबारे म्याक्स वेबरले दिएको परिभाषा सटीक र सम्पूर्ण मानिन्छ । उनका अनुसार, राज्यका तीन वटा पक्ष हुन्छन्— भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता । त्यसो त राज्यका विविध रूपमध्ये राज्य भनेकै एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गको तानाशाही शासन मान्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लोकतन्त्रको उच्चतम रूप मान्ने समाजवादी राज्यको परिभाषा पनि उल्लेखनीय छ । र, पछिल्लो चरणमा राज्यलाई पितृसत्तात्मक र नस्लवादी संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने संरचना ठान्ने नारीवादीहरूको परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी तीनवटै परिभाषाबाट हेर्दा नेपालमा प्रचलित राज्यको आधारभूत चरित्र, त्यसलाई विशेष गरी ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) का रूपमा गरिएको विकासलाई प्रस्टै नियाल्न सकिन्छ ।
‘राज्य’ को अवधारणामा शासकीय सम्प्रभुता र राजनीतिक संरचना अनिवार्य हुन्छन् भने ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा मूलतः समान भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका जनताको सामूहिक र सामुदायिक पहिचान वा अस्मिता अपरिहार्य हुन्छ । भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा बन्ने राष्ट्र, बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेझैं, ‘कल्पित समुदाय’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) वा इम्यानुयल वालरस्टिन–एटियन बालिबरले भनेझैं ‘अस्पष्ट पहिचान’ (एम्ब्युग्युयस आइडेन्टिटी) हुन सक्छ । तर यही राष्ट्रसँग भावनात्मक उत्तेजना जोडिँदा व्यक्तिविशेषले राष्ट्रवादी लाभा ओकल्छ र आफ्नो राष्ट्रका लागि मर्न–मार्न प्रेरित हुन्छ । कुनै पनि सम्प्रभु राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषाका आधारमा, समान जातिका आधारमा, समान संस्कृति र समान क्षेत्रका आधारमा अनि समान ऐतिहासिक निरन्तरता भएका जनताको सामूहिक पहिचान वा सामुदायिक अस्मितालाई रचना गरेमा पूर्ण रूपमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्छ ।
यी सबैको व्यावहारिक अर्थ हो— कुनै जमानामा ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा वा गोरखा) एउटा देश थियो; ‘गोर्षाराज’ त्यसको राज्य थियो; ‘गोर्षाली’ नामक भाषा, जाति र संस्कृतिको पहिचानचाहिँ राष्ट्र थियो । नेपालभित्र गोर्षाली ‘राष्ट्र–राज्य’ का शासक थिए भने नेपालबाहिर गोर्षाली भाषा र जातिको पहिचान भएका राष्ट्रका रूपमा मात्रै । अहिले नेपाल एउटा देश हो भने नेपालमा राज्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य छ र नेपालीचाहिँ राष्ट्रका रूपमा — कसैका लागि भाषिक पहिचानका रूपमा, कसैका लागि जातीय अस्मिताका रूपमा, कसैका लागि संस्कृतिका रूपमा, कसैका लागि ती सबैको समष्टिगत गौरवशाली भावना र आदर्शका रूपमा — नेपालभित्र–बाहिर क्रियाशील छ ।
नेपालको भूगोलभित्र बनेको राज्यले एउटै मात्र भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा राष्ट्र–निर्माण (नेसन बिल्डिङ) गर्‍यो कि गरेन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको सामुदायिक प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालको राज्य खासमा ‘राष्ट्र–राज्य’ हो कि ‘बहुराष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुल राष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ हो भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउँछन् ।
यहाँ ‘आधुनिक राज्य’ को पगरी गुथाइएको राज्य–गठन (स्टेट फर्मेसन) को इतिहास गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिन्छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गोर्खा साम्राज्यको विस्तार इङ्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि ब्रिटिस साम्राज्य) सँग द्वन्द्व र सुलहपछि नेपालको भू–क्षेत्रीय सीमा निश्चित भएको हो । एकपछि अर्को आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पार्दै ‘गोर्षाराज’ माथि आसीन शाह र राणा शासकहरूले हिंसामाथि एकाधिकार कायम गरेका हुन् । त्यसमाथि पटक–पटक चुनौती सृजना भए पनि दमन र सम्झौतापछि हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार कायम हुँदै आएको विगत छ । यस भू–क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई राज्यको आदेश पालन गर्न सहमत गराउन वैधताका अनेक अवधारणाको अभ्यास गरिएको तथ्य स्मरणीय छ । वैधताको अवधारणा र अभ्याससँग राज्यको गठन मात्रै होइन, राष्ट्र–निर्माणको महागाथा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) पनि गाँसिएको छ ।
राजा महेन्द्रद्वारा कथिएको राष्ट्र–निर्माणको महागाथाले हाम्रो दिलदिमागलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ— नेपालका राष्ट्रनिर्माता खासमा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । यस्तो महागाथा सुन्दासुन्दै धेरै नेपालीलाई नेपाल देश नै शाहले बनाएका हुन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ । कुनै शंका छैन, वर्तमान नेपालको भौगोलिक मानचित्र उनले गरेको साम्राज्य विस्तार र राज्य गठनको उपज हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, उनीसहित शाह र राणा शासकहरूका लागि सिंगो अधिराज्यको नाम ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा) नै प्यारो थियो । आजभन्दा करिब नौ दशकअघि मात्रै देशको नाम ‘नेपाल’ का रूपमा स्विकारिएको हो भने, पहिले खस–पर्वते–गोर्खाली भनिने भाषालाई ‘नेपाली’ नामकरण गरिएको हो ।
यस अर्थमा पहिलेको गोर्षा अहिलेको नेपाल भू–सिमानासहितको सार्वभौम देश हो । यस भूभागमा राज्यका रूपमा औपचारिक स्तरमा आठ दशकअघिसम्म ‘गोर्षाराज’ लाई नै राज्यका रूपमा क्रियाशील राखिएको थियो । त्यही राज्यसँग एकल जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको ‘राष्ट्र’ (नेसन) पनि जोडिएको छ । भनिन्छ, त्यस राष्ट्रलाई नै शाहले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को नाम दिएका थिए । यही देशीय भूगोलमा गठित ‘गोर्षाराज’ को विस्तारलाई वैधता दिन उनको पालादेखि ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास गरिएको हो ।
प्रयागराज शर्माका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिदेखि नै स्थापित यहाँको राष्ट्र–राज्यका मूल आधार थिए– (क) गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण, (घ) सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।
यस्तो राष्ट्र–राज्यमा कोही राष्ट्रनिर्माता हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ पितृसत्तात्मक राष्ट्रका पिता र पति पनि ! एकल राष्ट्र–राज्यको वैधता र वर्चस्वका लागि, त्यसका सञ्चालक राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभुत्वका लागि अनेक संरचना, महागाथा र कथ्य निर्माण गरिएका छन् । करिबकरिब एकाध वर्ण, जात, जाति र एकल धर्म, भाषा, संस्कृतिको राष्ट्र–राज्यबारे विविधता, बहुलता र अनेकताको कोणबाट प्रश्न उठ्नासाथ अराष्ट्रिय तत्त्व, देश विखण्डनकारी र देशद्रोहीका रूपमा आरोपित हुने खतरा अझै छ ।
देश बहु राष्ट्र : राज्य एकल राष्ट्र
पक्कै पनि असिल हिन्दुस्थानालाई संवैधानिकता दिने मुलुकी ऐन–१९१० मा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ; नयाँनयाँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ बाट ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षता’ पनि लागू भइसकेको छ । तर मूल प्रश्न बाँकी नै छ– विद्यमान राष्ट्र–राज्यमा कुन जात, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रकाले शासन गर्दै छन् ? संविधान निर्माणअघि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाएका थिए, ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ अब सवाल उठाउनुपर्ने भएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के हो ? गणराज्यको राष्ट्र के हो ? गणतान्त्रिक संविधानमा दिइएको फूलबुट्टे परिभाषाले राष्ट्रको मूल मर्म बोक्छ कि मर्मलाई नै टोक्छ ?
कुनै सन्देह छैन, अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन । त्यो राष्ट्र अझै एकल र समरूपी छ– जात, जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको हिसाबले बहुल भएको छैन; शिक्षा, मिडिया, प्रशासनमार्फत एकरूपता वा समरूपताको बुलडोजर चलाउँदै विविधता, बहुलता र अनेकताको विनाश जारी छ । देशमा भाषा, जाति, क्षेत्रका आधारमा धेरै राष्ट्र छन् भने एकल राष्ट्र–राज्य दमनकारी र विभाजनकारी नै हुन्छ ।
सन् १६४८ मा ठूला युद्धको सम्बोधनका लागि भएको वेस्टफेलिया सन्धिले भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपमै थोत्रिसकेको छ, दमनकारी र विभाजनकारी साबित भएकै कारण ब्रिटेनदेखि स्पेनसम्ममा आन्तरिक प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैको नक्कल गर्दै निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य र त्यसको अवधारणा बहुराष्ट्रिय देशका लागि पनि अत्याधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै कसरी माला जपिरहन सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदैमा, त्यसअनुसार प्रदेशको नाम र सीमा तोक्दैमा, अधिकार विनियोजन गर्दैमा देशमा सर्वनाश हुँदैन भन्ने जीवित उदाहरण झारतलगायत दर्जनौं देश नै छैनन् र ?
प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१४